आज पनि बाढी-पहिरोको जोखिम, कुन-कुन ठाउँ खतरामा ? – Everest Dainik – News from Nepal
आज पनि बाढी-पहिरोको जोखिम, कुन-कुन ठाउँ खतरामा ?
काठमाडौं, असार ३० । देशभर मनसुन सक्रीय भएकाले आज पनि विभिन्न क्षेत्रमा बाढी तथा पहिरो जान सक्ने सम्भावना छ । विशेष गरि पहाडी क्षेत्रमा बाढी तथा पहिरोको जोखिम रहेको मौसम विभाग अन्तर्गतको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । पहाडी क्षेत्रमा अहिले पनि पानी परिरहेकाले साना खोलामा बाढी आउने सम्भावना रहेको बाढी विज्ञ विनोद पराजुलीले बताए ।
पहिरोको जोखिम रहेका क्षेत्रमा अहिलेको पानीले थप जोखिम बढाएको पराजुलीले बताए । विशेषगरी दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, लमजुङ, गोरखा, डोटी, बाजुरा, बझाङ, डडेलधुरासहितका ठाउँमा पानी पर्ने र त्यस क्षेत्रका साना खोलामा बाढी आउने सम्भावना रहेको उनले जानकारी दिए ।
तर तराईका क्षेत्रमा भने बाढीको सम्भावना नरहेको बाढी विज्ञ पराजुलीले बताए । ठूला खोलामा बाढीको सम्भावना कम रहेको महाशाखाले जनाएको छ । पश्चिमका कैलाली, कञ्चनपुरसहितका क्षेत्रमा पानी पर्ने सम्भावना रहेकाले खोला आसपासका बासिन्दाले सजग हुन महाशाखाले आग्रह गरेको छ ।
ट्याग्स: Badhi Pahiro, बाढी-पहिरो